Shiinaha 2020 4-lakab oo tayo sare leh FFP2 Maskaxda wasakheynta hawada wasakheynta Anti-boodhka Wajiga Maaskaro Caafimaadka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Caafimaadka AKF
2020 4-lakab oo tayo sare leh FFP2 Maskaxda Wasakhowga Hawada Filter Anti-boodka Wajiga Caafimaadka Maska
Shayga: FFP2 oo madaxa lagu rakibay qalabka neefsashada
Qaabka: Dhegaha-looxa / Xidhmada 4 lakab
Waxyaabaha: cad PP dhar aan tolmo lahayn + Cufka suufka caaga ah
Heerka amniga: GB2626-2006
Midabka: Buluug, Caddaan
Codsiga: Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay isbitaalka & daryeelka caafimaadka, shumacyada caafimaadka & parmacy, salon qurxinta, soosaarida cuntada, ilaalinta warshadaha, isticmaalka maalinlaha ah iwm.
Xirxirida: 10 gogo '/ sanduuq
1. Shuruudaha caadiga ah:
1. Faahfaahinta farsamo waxay waafaqsan tahay GB 19083-2010, GB 2626 iyo heerka EN 149.
2. Warbixinta baaritaanka ee ku saleysan EN149 iyo heerka NIOSH ayaa la heli karaa.
2. Muuqaalka sheyga:
1. Qaab dhismeedka 4-lakab, si fiican ugu dheji wejiga; naqshadda duuduuban ayaa ku habboon in la qaado.
2. Nooca N95 PFE≥95%
3. Waxay leedahay hantida u adkaysiga u dulqaadashada dhiiga; Waxay sidoo kale si wax ku ool ah u qaban kartaa shaqada ilaalinta go'doominta.
4.Leak caddayn ★ ★ ★ ★ ★ Heerka raaxada ★ ★ ★ ★
3. Range of application: Heerka 2 iyo shuruudaha ilaalinta 3
Sii carqalad iyo ilaalin shaqaalaha caafimaadka ee la xiriira bukaanka cudurada faafa ee dhiiga, dareeraha jirka, dheecaanka, iwm ee shaqada.
Waxay quseysaa isbitaalada cudurada faafa, mudada xakameynta cudurada faafa iyo kahortaga.
PFE> 94% Maaskarada Wejiga la Tuuri karo
37.5 Dhar aan tolmo lahayn, 37.5% Meltblown dhar, 25% ES suuf hawo kulul
Codsiga: Daryeelka shaqsiyeed, daryeelka caafimaadka
Maqaarka u fiican, raaxeysan, neefsashada sare
Raaxo & Neefsasho
Ka samaysan dhar maqaarka ku habboon oo aan tolmo lahayn, maaskaradaasi waa mid khafiif ah oo raaxo leh, ma xoqin wejigaaga iyo qurxinta.
99% Heerarka Kala sifeynta Sare
Dhammaan tilmaamayaasha waxtarka shaandhayntu waxay ka sarreeyaan 99%, ka hortagga boodhka wax ku oolka ah, warshadaha PM2.5, gaaska cuncunka leh, qiiqa, walaxda, xasaasiyadda, manka, qiiqa baabuurta, iwm.
Qalabka deegaanka u fiican ayaa la qaatay. Naqshadeynta buundada sanka ayaa sida ugu habboon loogu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo qaababka wejiga ee kala duwan. Qaybta dhegtu way kala fidsan tahay oo si dhib yar ugama dhacdo. Aad u laastik ah, waji qumman ka dib fidinta.
1. Badeecadani waxay ku egtahay isticmaalka hal mar oo waa la baabi'iyaa isticmaalka ka dib;
2. Hubi in baakadaha maaskarada ay yihiin sidii wax u jiraan;
3. Maaskarada waa in lagu beddelaa waqtiga. Laguma talin inaad isticmaasho muddo dheer, waxaa lagugula talinayaa inaad u isticmaasho 4 saacadood;
4. Haddii raaxo-darro ama fal-celin aan fiicnayn ay dhacaan inta lagu jiro xirashada, waxaa lagugula talinayaa inaad joojiso isticmaalkeeda;
5. Shayga waa in lagu keydiyaa meel qalalan, hawo leh, hawo aan gaas lahayn oo gaas ah;
6. ansaxku waa 2 sano, fadlan isticmaal mudada ansax ah.
Hore: PE La tuuro Niosh oo La Ansixiyay Boorka FFP2 Nabarka Sanka Nabiga N95 Maqaarka Maskaxda Neefta Maska
Xiga: GB2626-2006 Shahaado La Ansixiyay Tayo Sare FFP2 maaskaro Facemask 5 lakab oo difaac ah oo la tuuri karo KN95 N95
Shahaadada GB2626-2006 Tayada Sare ee La Ansixiyay ...
PE La tuuro Niosh Oggolaaday Boorka FFP2 Amniga N ...